GUDDOOMIYAHA ISBOORTIGA DEGMADA YAAQSHIID OO SOO BOOQDAY DUGSIGA JAABIR BIN XAYAAN (Faraca Afarta Jardiino) – Mecca Al -Mukarama Foundation
GUDDOOMIYAHA ISBOORTIGA DEGMADA YAAQSHIID OO SOO BOOQDAY DUGSIGA JAABIR BIN XAYAAN (Faraca Afarta Jardiino)
Guddoomiyaha Isboortiga Degmada Yaaqshiid Md. Xasan Xuseen Maxamuud “Xasan Tahliil” ayaa soo booqday Dugsiga Jaabir Bin Xayaan (Faraca Afarta Jardiino), waxaa booqashada ku wehliyey Md. Abuukar Yuusuf Cali “Cijo” iyo Md. Cabdullaahi Cismaan Iimaan oo ka wada tirsan maamulka Isboortiga ee degmada Yaaqshiid.
Booqashada ayaa ku soo beegmaysay ka dib doorashadii dhawaan loo doortay Md. Xasan Tahliil guddoomiyaha Isboortiga ee degmada Yaaqshiid, iyadoo noqonaysa booqashadii ugu horreysay ee uu ku tago dugsiyada degmada Yaaqshiid.
Guddoomiyaha ayaa la kulmay maamulka, barayaasha leyliya kooxda Kubbadda Cagta ee dugsiga Jaabir Bin Xayaan iyo Guddoomiyaha Ardayda ee dhanka Isboortiga, labada dhinac ayaa isla soo qaaday sidii la isaga kaashan lahaa hawlaha isboorti ee degmada iyadoo dugsiga Jaabir Bin Xayaan guddigu ku ammaanay ka qayb qaadashada isboortiga degmada iyo gobolkaba horena u hantiyey dhawr koob tartamo isboorti oo isugu jira heer degmo iyo heer gobol oo loo qabtay dugsiyada gobolka Banaaadir.
Kulanka Guddiga Isboortiga degmada Yaaqshiid iyo Dugsiga Jaabir Bin Xayaan ayaa ku soo dhammaaday isfaham iyo wada shaqayn labada dhinac ah oo loo ballamay.
Waxaa xusid mudan in dugsiga Jaabir Bin Xayaan yahay dugsiga keliya ee yeeshay koox heerka koowaad ah ee Kubbadda Kolayga iyo koox heerka saddexaad ah oo Kubbadda Cagta ah.
Booqashada guddiga isboortiga ee degmada Yaaqshiid waxaa qayb ka ahaa Md. Nuur Cabdullaahi Cali oo ah halyey Isboorti oo ka qalin jebiyey dugsiga Jaabir Bin Xayaan kana mid ahaa xubnihii ka socday maamulka Isboortiga ee degmada Yaaqshiid.
Cabdulqaadir Max'ed Xasan on Mu’asasada Maka Almukarrama oo dugsi cusub ka furtay xaafadda Juungal